လူရမ်းကား: ဖိုးစံနှင့် သူ၏တီတီလေး( credit to achittatkatho)
ဖိုးစံနှင့် သူ၏တီတီလေး( credit to achittatkatho)
ဖိုးစံနှင့် သူ၏တီတီလေး( credit to achittatkatho) ကျွန်တော်တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်တက်နေတုန်း ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နယ်မြို့လေးကို တီတီလေးနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် တာဝန်ကျပြီး ပြောင်းလာတယ်။ တီတီလေးတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က စည်ပင်မှာအရာရှိပေါက်စလေးတွေ။ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် တစ်မြို့ထဲအတူတူကျအောင် လူကြီးတွေကို ဘလူးလေဘယ်တစ်ယောက်တစ်လုံးနဲ့ ဂေါက်စက် (Golf set) တစ်စုံစီဝယ်ပေးလိုက်ရတယ်တဲ့။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်ဘေးက အိမ်မှာ သူတို့နှစ်ယောက်ငှားနေဖြစ်ကြတယ်။ တီတီလေးဆိုတာ ကျွန်တော့်အဒေါ်တစ်ဝမ်းကွဲတော်တယ်ဆိုရမလားပဲ .... အမေ့ဘက်ကအဖွားနဲ့ သူ့အမေနဲ့ကညီအစ်မအရင်း အဖွားက ညီအစ်မ ၇ ယောက်မှာ အကြီးဆုံး တီတီလေးအမေကတော့ အငယ်ဆုံးပါ။ တီတီလေးကကျွန်တော့ထက် အသက် ၈ နှစ်လောက်ကြီးတယ်။ အဖေက ဘူမိဗေဒ၊ သတ္တုရှာဖွေရေးဌာနကဆိုတော့ အမြဲတမ်းလိုလိုခရီးထွက်နေရာတာ။ တီတီလေးတို့နှစ်ယောက် အိမ်နားမှာလာငှားနေတော့ အမေလည်းအဖေါ်ရသွားတယ်။
စာမေးပွဲဖြေပြီးကျောင်းပိတ်တော့ကျွန်တော် အိမ်ပြန်လာတယ်။ သင်္ဘောဆိပ်ကဆင်းပြီး မနက် (၇) နာရီလောက်အိမ်ပြန်ရောက်တယ်။ " ဟေ့ ဖိုးစံပြန်လာပြီ .............. " တီတီလေးရဲ့အသံပါ ခြံတံခါးဖွင့်တုန်းပဲရှိသေးတယ် လူမြင်ရသေးဘူး အသံအရင်ကြားရတယ်။
အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ အမေရယ် အန်တီလေးရယ်၊ တီတီလေးအရွယ်အစ်မတစ်ယောက်ရယ်တွေ့တယ်။ အဖေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ခရီးထွက်နေတာပေါ့။
တီတီလေးက " သော်သော်၊ ဒါငါ့တူလေ စံမြင့်ကျော်တဲ့၊ အားလုံးကတော့ဖိုးစံလို့ခေါ်ကြတယ်။"
"ဖိုးစံ... သား .. ဒါ သော်သော်ဝင်းထိန်၊ အန်တီလေးသူငယ်ချင်း၊ ကျောင်းထဲကသူငယ်ချင်း၊ မင်းကမမသော်သော်လို့ခေါ်ပေ့"
အမေက " ဖိုးစံရေ ငါတော့ မင်းတီတီလေးရောက်လာကတည်းက မပျဉ်းရတော့ဘူး၊ မင်းလာမယ်ဆိုလို့သူတို့က ဒီဘက်အိမ်လာပြီးစောင့်နေကြတာ။ ..... ကဲ ကဲ ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ ကော်ဖီနဲ့သောက်လိုက်ဦး မင်းအကြိုက်ငါလုပ်ထားပေးတာ"
အခန်းထဲဝင်အဝတ်အစားလဲမျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက်ပြီး ပြန်ထွက်လာ .... ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ကော်ဖီသောက်နေလိုက်တယ်။ အမေနဲ့ တီတီလေးတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကတော့ လေပေးဖြောင့်နေလေရဲ့။
တီတီလေးနဲ့ မတွေ့ရတာ သူ ၇ တန်းနှစ်ကထဲက အခုတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ဖြေပြီးပြီဆိုတော့ ၄ နှစ်လောက်ရှိပြီ။ အဲဒိတုန်းက သူအသက် ၁၂ နှစ် တီတီလေးက အသက်၂၀။ အခုသူ အသက် ၁၇ နှစ်၊ တီတီလေးက အသက်၂၅ နှစ်ရှိပြီ။ အရင်တုန်းက ကိုယ်ကပဲငယ်သေးလို့မကြည့်တတ်တာလား၊ အခုမှပဲပိုလှလာတာလားတော့မသိဘူး တီတီလေးက ကျွန်တော့မျက်စေ့ထဲမှာ တော်တော်လှနေတယ်။ အသားလေးက ဖြူဝင်းနေတယ်။ သေးသေးကျင်ကျင်ခါးလေးရဲ့အောက်မှာ ကားစွင့်နေတဲ့ဖင်ကြီးတွေက စည်ပင်ဝတ်စုံ ထဘီအစိမ်းရောင်လေး အောက်မှာ ရုန်းထနေတယ်။ လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း စည်းချက်ညီညီတုန်ခါသွားတဲ့ ဖင်အသားစိုင်တွေကို ဖိုးစံ ခိုးမကြည့်ပဲကိုမနေနိုင်ဘူး ... ကော်ဖီသောက်၊ ကောက်ညှင်းပေါင်းစားရင်းနဲ့ မသိမသာလှမ်းလှမ်းရှိုးနေမိတယ်။ ............ တီတီလေးသူငယ်ချင်း သော်သော် ကလည် တီတီလေးနဲ့အပြိုင်ပဲလှတယ်။ တီတီလေးကိုအသားမဖြူပေမဲ့ ညိုစိမ့်စိမ့်အသားရေက ကြည်လင်ဝင်းပနေတယ်။ ခန္ဒာကိုယ်ကခပ်ပြားပြားပေမဲ့ ဖုသင့်တဲ့နေရာဖု၊ ဖေါင်းသင့်တဲ့နေရာဖေါင်း တကယ့်ကိုစံပြငါရံ့ကိုယ်လုံးလို့ဆိုရမလိုပဲ ရင်တွေတင်တွေက အချိုးအစားကျကျ ပြေပြေပြစ်ပြစ်လေးရယ် ..........
မေမေနဲ့ တီတီလေးတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် နှစ်အိမ့်တစ်အိမ်လိုနေနေကြတယ်။
တစ်ရက် ညနေ ၅ နာရီလောက် တီဗွီဂိမ်းဆိုင်ကပြန်လာပြီး အိမ်အပေါ်ထပ်တက် ကိုယ့်အခန်းထဲကိုယ်ဝင် ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပြီး ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး အောက်ငုံ့ကြည်လိုက်တော့ ...........
လား ... လား .....
တီတီလေးတို့ အိမ်ဘက်က တီတီလေးတို့နှစ်ယောက်နေတဲ့ အခန်းပြတင်းပေါက် တစ်ချပ်ပွင့်နေပြီးတော့ တီတီလေးနဲ့ မမသော်သော် ရုံးကပြန်လာပြီး အဝတ်တွေလဲနေကြတယ်။ ... တီတီလေးက အပေါ်အင်္ကျီချွတ်ထားပြီးသွားပြီ အောက်ကထဘီအစိမ်းရောင်ဝတ်ထားပြီး အပေါ်မှာဘရာစီယာလေးပဲရှိတယ်။ မမသော်သော်က ထဘီကိုအောင်မှာကွင်းလုံးပုံချွတ်ထားတယ် အတွင်းခံဘောင်းဘီအဖြူလေးရဲ့အောက်မှာ
ဖင်လုံးလေးတွေတင်းနေတာပဲ။ အပ်ါက မြန်မာအင်္ကျီကိုချွတ်နေတုန်း။ ....
သူတို့နှစ်ယောက်နေတဲ့အခန်းက အိမ်ရဲ့နောက်ဆုံးနားကအခန်း၊ အဲဒိအခန်းနောက်မှာမီးဖိုပဲရှိတော့တယ် လူသွားလမ်းနဲ့လည်းဝေးတယ်။ ဘေးဘက်အိမ်ကလည်း အမျိုးအိမ်ကြားမှာလည်း လူ့တစ်ရပ်လောက်ဝါးထရံကဒ်တွေကာထားတော့ ဘယ်သူ့မှမမြင်လောက်ဘူးဆိုပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် တံခါးတွေအကုန်မပိတ်ပဲ အဝတ်လဲပုံရတယ်။ ဖိုးစံနေတဲ့အခန်းနဲ့ ဘေးချင်းကပ်လျှက် ဖိုးစံကအပေါ်ထပ် ဆိုတော့ အပေါ်ကမိုးကြည့်ပြီး အကုန်မြင်ရတာပေါ့။ ......
ဖိုးစံလည်း သူ့ကိုသူတို့သတိပြုမိမှာစိုးပြီး ချက်ချင်းပဲပြတင်းပေါက်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။ အကုန်ပိတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး ချောင်းကြည့်လိုရရုံလောက်လေး ဟထားပြီး ဆက်ချောင်းတယ်။ .... သူချောင်းနေတုန်းပဲ သော်သော်က အပေါ်အင်္ကျီချွတ်ပြီးသွားပြီ။ တီတီလေးက လည်းထဘီကိုကွင်းလုံးပုံချွန်လိုက်တယ်။ ဖြူဝင်းဖြောင့်စင်းနေတဲ့ ပေါင်တံတွေထက်မှာ တင်းကားပြည့်ဖြိုးနေတဲ့ တီတီလေးရဲ့ဖင်တွေ .... အပေါ်ကထဘီခံထားတာတောင် ဖိုးစံခိုးခိုးကြည့်နေရတာ အခုလို အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးတစ်ထပ်ထဲနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဖိုးစံဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့ဘူး ပုဆိုးကိုကွင်းလုံးပုံချွတ်ချပြီး သူတို့အခန်းကိုချောင်းနေရင်းနဲ့ မာတောင်နေတဲ့ သူလီးကြီးကိုကိုင်လို့ အဆက်မပြတ်ဂွင်းတိုက်ပါတော့တယ်။ ...
ကြည့်နေရင်းပါပဲ မမသော်သော်ဝတ်ထားတဲ့ ဘော်လီချိန်တွေကို တီတီလေးကနောက်ကနေဖြုတ်ပေးနေတယ်၊ ချတ်တွေအကုန်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် မမသော်သော်က ဘော်လီကိုသူ့ဖါသာသူအသာလေးချွတ်လိုက်တယ်။ ....... ညိုစိမ့်စိမ့်နဲ့ ဝင်းမွတ်နေတဲ့ နို့လေးနှစ်လုံးဟာ ဖိုးစံမျက်စေ့ရှေ့မှာ ဘွားကနဲပေါ်လာတော့တယ်။ မမသော်သော်က ပြတင်းပေါက်ဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး သူနို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လက်ကလေးနဲ့ အသာပွတ်ပြီး အလင်းရောင်မှာ ကြည့်တယ်။ ဘာကိုကြည့်တာလဲတော့မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဖိုးစံတော့ မရတော့ဘူး .... ဂွင်းထုနေတဲ့လက်က စက်တပ်ထားသလိုဒရစပ်ဖြစ်လာပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်လရည်တွေ ပြစ်ခနဲ၊ ပြစ်ကခဲကျကုန်တော့တယ်။ ....... ဖိုးစံလည်း သက်ပြင်းရှည်ကြီးချပြီး
စက္ကန့်ပိုင်းလောက်မျက်စေ့လေးမှိတ်ပြီး အရာသာလေးခံလိုက်တယ်။ နောက်မျက်စေ့ပြန်ဖွင့်ပြီး ပြတင်းပေါက်ကထပ်ချောင်းလိုက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်မရှိတော့ဘူး အခန်းထဲအတွင်းဘက်ကိုဝင်သွားပြီနဲ့တူတယ်။ ....... ဒီလိုနဲ့ပဲ တီတီလေးနဲ့ မမသော်သော်တို့ရဲ့ ရုံးသွားရုံးပြန်ချိန်တိုင်း အဝတ်လဲတာကို ဖိုးစံတစ်ယောက်ချောင်းလိုက် ဂွင်းထုလိုက်နဲ့ တစ်ပတ်လောက်ရှိလာပါတော့တယ်။ ..... နှစ်အိမ့်တစ်အိမ်လိုနေနေကြတော့ တီတီလေးတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ ဖိုးစံလည်း တစ်ပတ်အတွင်းမှာ အရင်ကထက် အဆပေါင်းများစွာပိုရင်းနီးသွားပါတယ်။ ......
ဒီလိုနဲ့သင်္ကြန်နားနီးလာတယ်... တီတီလေးတို့ရုံးက သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက် ချောင်းသာသွားလည်ကြမယ်။ ၃ ရက်ကြာမယ်တဲ့။ တီတီလေးကော မမသော်သော်ကောလိုက်သွားမယ်။ ဖိုးစံကို အိမ်သော့ပေးခဲ့ပြီး သူတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင် လေးကို မနက်ည အစာကျွေးပေးထားပါတဲ့။ ....
သင်္ကြန်ပိတ်ရက်ရှည် စစချင်းပဲ တီတီလေးတို့နှစ်ယောက် ချောင်းသာထွက်သွားကြတယ်။ .......
ဖိုးစံ မနက်စောစော ကြောင်စာကျွေးဖို့ ထမင်းနည်းနည်းကို ပုဇွန်စိတ်လှော်လေးနဲ့နည်ပြီး တီတီလေးတို့အိမ်ဖက်ကူးလာတယ်။ အမေကတောင် " ကောင်လေး ဝိရိယတော်တော်ကောင်းနေပါလား၊ နင်ကြောင်ချစ်တတ်တယ်လို့လည်းငါတစ်ခါမှမကြားမိပါဘူး".....
ဖိုးစံက သူ့အကြံနဲ့သူပါ ....
အိမ်တံခါးဖွင့်ပြီး ကြောင်စာမြန်မြန်ကျွေးတယ် နောက် ....... တီတီလေးတို့နှစ်ယောက်အိပ်တဲ့အခန်းထဲကိုဝင် အိပ်ယာတစ်ချင်းစီရဲ့ဘေးနားလေးက အံစွဲလေးတွေထဲဖွင့်လိုက် .... တွေ့ပါပြီ။ ...... သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတွင်းခံအဝတ်တွေ ..... ။
ဖိုးစံတစ်ယောက် ချက်ချင်းပဲ တီတီလေးနဲ့ မမသော်သော်ရဲ့ ပင်တီလေးတွေ၊ ဘရာလေးတွေကို အိပ်ယာပေါ်ဖြန်ကျဲလိုက်တယ်။ သူ့ကိုယ်သူလည်း ပုဆိုးကိုခါးပုံစဖြည်ပြီး ဂွင်းလုံးပုံချ ။ ဝတ်ထားတဲ့တီရှပ်ကို ချွတ်ပြီး ခုနဖြန့်ကျဲထားတဲ့ ပင်တီတွေဘရာတွေပေါ်မှာ လှဲအိပ်လူလှိမ့်နေတယ်။ ပင်တီလေးတွေက ရတဲ့ပရုပ်လုံးနံ့သင်းသင်းလေးတွေကို ရှူရှိုက်ရင်းတဖြည်းဖြည်းလီးတောင်လာတယ်။
တီတီလေးအံစွဲထဲဆက်မွေတော့ ပန်းရောင် G-string လေးတစ်ထည်သွားတွေ့တယ်။ အဲဒိ G-string လေးကိုမျက်နှာပေါ်မှာတင် တီတီလေးရဲ့ဖင်ကြီးကိုနဲ့ G-string လေးဝတ်ထားပုံကိုစိတ်ကူးယဉ်....... လက်တစ်ဘက်ကလည်း လီးကိုကိုင်ပြီး အားရပါးရ
ဂွင်းထုလိုက်တာ ၄-၅ မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ် အိပ်ယာပေါ်လရည်တွေပန်းထုတ်ပြီး ပြီးသွားတယ် .... မမသော်သော်ရဲ့ဘောင်းဘီလေးတစ်ထည်နဲ့ ဘရာလေးတစ်ထည်တောင် လရည်နည်းနည်းစိုသွားလို့ သုပ်ပြီးတော့ သူ့အဲစွဲထဲပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ...... သုံးရက်မြောက်တဲ့နေမှာ တီတီလေးပြန်လာတယ်၊ မသော်ပါမလာဘူး။ သူ့မိဘတွေရှိတဲ့ မန္တလေးကို ချောင်းသာကနေဆက်သွားတယ်တဲ့၊ သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်တွေ ပြီးတော့မှ ပြန်လာမယ်တဲ့။
တီတီလေးက ကြောက်တတ်တယ် တစ်ယောက်ထဲမအိပ်ရဲဘူဆိုပြီး မမသော်သော်မရောက်ခင်အထိ အိမ်မှာညလာအိပ်မယ်တဲ့။ မေမေက သူနဲ့အထူအောက်ထပ်မှာအိပ်လို့ပြောပေမဲ့ သူကညဉ့်နက်တဲ့အထိစာဖတ်တာတို့၊ ဂိမ်းကစားတာတို့ လုပ်တဲ့အတွက်မေမေ့ကိုအားနာတယ်ဆိုလို့ အပေါ်ထပ်က ဖိုးစံအခန်းခံကပ်လျှက်အခန်းကို ဖိုးစံပဲသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ကုတင်ပြင်ပေးလိုက်တယ်။ ည ၁၀ နာရီ ခွဲ လောက်ရှိတော့ မေမေအိပ်ပြီ။ ဖိုးစံတစ်ယောက်ကတော့ သူ့အခန်းထဲမှာလက်တော့ဖွင့်၊ ဖုန်းလေးနဲ့အင်တာနက်ချိတ်ပြီး porn ဆိုဒ်တကာလိုက်လံမွှေနှောက်နေလေရဲ့။ အဲဒိအချိန်မှာပဲ ဟိုဘက်အခန်းကနေ တီတီလေးက နံရံကိုထုတယ် " ကောင်လေး၊ ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီး ဘာတွေမဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာလဲ"
ဖိုးစံကလည်း " ဟာ တီတီလေးကလည်း ဘာမှမလုပ်ပါဘူး ..... ညီနေမင်းတို့၊ နေမင်းမောင်တို့၊ စံပီးတို့ နည်းပညာဆိုဒ်တွေဝင်ပြီး ဟိုဟိုဒီဒီလေ့လာနေတာပါ။"
တီတီလေးက "အေးပါ .... ငါ Laptop ကိုတစ်ချက်လောက်လာကြည့်ပေးပါဦး Themes ပြောင်းလိုက်တာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်မသိဘူး။ မြန်မာလိုရေးထားတာတွေ ကောင်းကောင်းမပေါ်တော့ဘူး။ Themes အဟောင်းပြန်ပြောင်းတာလည်းမရဘူး။"
ဖိုးစံလည်း "ဟုတ်ကဲ့ ... ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီး တီတီလေးအခန်းဘက်ကူးသွားတယ်။"
တီတီလေးက အပေါ်အောက်တဆက်တည်း ဂါဝန်နို့နှစ်ရောင်ခပ်ပါးပါးလေးကိုဝတ်ထားပြီး အိပ်ယာပေါ်မှာ မှောက်လျှက် အနေအထားနဲ့ လက်တော့ကို အိပ်ယာပေါ်တင်ပြီး သုံးနေတာ။
ဖိုးစံ အခန်းထဲဝင်သွားတော့ တီတီလေးက မှောက်လျှက်ပဲ။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းက အခန်းတားခံဝကိုပေးထားတယ်။ ဂါဝန်က ပေါင်ရင်းနားကပ်နေပြီ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကလည်း ခပ်ဟဟလေး။ ဖိုးစံ ဂုတ်လေးကို မသိမသာလေးပုပြီး ပေါင်နှစ်လုံးကြားကို ကြည့်ကြည့်သေးတယ် မီးချောင်းအလင်းရောင်က အပေါ်ကထိုးထားတာဆိုတော့ ပေါင်းနှစ်လုံးကြားမှာ အရိပ်ကျနေပြီး သဲသဲကွဲကွဲဘာမှ
ဖိုးစံရောက်တော့မှ တီတီလေးက အိပ်ယာပေါ်ကထပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ ခြေနှစ်ချောင်းတွဲလောင်းချထိုင်လိုက်တယ်။ ဖိုးစံလည်း ကွန်ပျူတာကိုစစ်ကြည့်လိုက်တော့ OS က Win7 တင်ထားတာ Themes ပြောင်းလိုက်လို့ Icon တွေ၊ Folder တွေမြန်မာလိုနာမည်ပေးတားထာတွေ မမြင်ရတော့တာ။ သိပ်မခက်ပါဘူး ..... Desktop ပေါ် Right Click ခေါက် Personalize> Windowclor> Advanced appearance setting ထဲဝင်ပြီး အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီမှာ Zawgyi ဖေါင့်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ ........
တီတီလေးက " ကောင်လေး .... မဆိုးဘူးတော်သားပဲ .... ဒါတွေလည်းရတာပဲနော်။ ငါကမင်းကို တနေ့တနေ့ ပေါက်တတ်ကရ ဆိုဒ်တွေဝင်ပြီး နှာဘူးချည်းထနေတယ်ထင်နေတာ"
ဖိုးစံက " ဟာ ... တီတီလေးကလည်း ကျွန်တော် အဲဒီဆိုဒ်တွေမကြည့်ပါဘူး။ MPT ကလည်းပိတ်ထားတာပဲ"
တီတီလေးက " အောင်မာ ..... ငါ့ကိုလာလှိမ့်မနေနဲ့ ....၊ ဒေါက်တာချက်ကြီးတို့
၊ ညမင်းသားတို့ မကြည့်ဘူးလား၊ အချစ်တက္ကသိုလ်ကော မဝင်ဘူးလား"
ဖိုးစံက " တီတီလေးကလည်း အဲဒါတွေသိတယ်လား ....."
တီတီလေးက " သိတာပေါ့ ငါကအမြဲအင်တာနက်သုံးနေတာပဲ။ သူများကြားမှာ မအရအောင် အကုန်လိုက်ကြည့်ထားတာပေါ့၊ နင့် မမသော်သော်ဆို သူ့ကိုယ်ပိုင် porn ဘလော့တောင် ထောင်ထားလိုက်သေးတယ်။"
တီတီလေးက ဆက်ပြီး ...... "ကဲပါ ... နင့်ကိုကွန်ပြူတာပြင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ ငါတို့ချောင်းသာမှာရိုက်လာတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပြမယ် လာကြည့်"
ဆိုပြီး memory card လေးစိုက်ထားတဲ့ Card reader လေးကို USB အပေါက်မှာထိုးလိုက်တယ်။
ဖိုးစံက " ကြည့်ချင်ပါဘူး .... ကျွန်တော်လည်း ချောင်းသာလိုက်ရတာမဟုတ်ပဲနဲ့။ ..... သူများတွေမြူးနေကြတာကြည့်ပြီး ဘာလုပ်ရမှာလဲ"
တီတီလေးက "လာကြည့်စမ်းပါ .... မင်းစိတ်ဝင်စားစေရမယ် ...... မင်းကြည့်နေတဲ့ဆိုဒ်တွေထက်ပိုလန်းတာတွေ ငါ့ကဒ်ထဲမှာရှိတယ် ......။ ငါ့ကိုယုံစမ်းပါ။"
ဖိုးစံလည်း တီတီလေးအပြောကြောင့်နည်းနည်းစိတဝင်စွားသွားပြီး ကွန်ပျူတာနားကိုကပ်သွားလိုက်တယ်။ ..... တီတီလေးက ကာဒ်ထဲက ပုံ Folder တွေကို အကုန်လုံးကူးပြီး Desktop ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ နောက် ..... ဓာတ်ပုံတွေကို တစ်ပုံချင်းဖွင့်ပြတယ်။ အစပိုင်းပုံတွေက သူတို့အဖွဲ့ကားပေါ်တက်တဲ့ပုံတွေ၊ လမ်းမှာထမင်းစားတဲ့ပုံတွေ၊
" တီတီလေးကလည်း ... ဒီပုံတွေကဘာလုပ်ရမှာလဲ ကျွန်တော်လည်းသွားတဲ့အဖွဲ့ထဲမှမပါတာ ဘာစိတ်ဝင်စားစရာရှိလို့လဲ"
တီတီလေးက " ကောင်လေးရာ စိတ်ရှည်ရှည်ထားစမ်းပါ လာမှာပေါ့" ဆိုပြီး ပုံ ၁၀ ပုံ ၁၅ ပုံလောက်ကို ခတ်သွက်သွက်ကလေားကျော်ပစ်လိုက်ပြီး "ကဲ ... ဒီမှာမင်းစိတ်ဝင်စားစရာတွေလာပါပြီ" လို့ပြောလိုက်တယ်
ဖိုးစံကြည့်လိုက်တော့ တီတီလေးရယ်၊ မမသော်သော်ရယ်၊ တခြားကောင်မလေးရယ် (၃)ယောက် ရေကူးဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ အခန်းထဲမှာရိုက်ထားကြတာ။ ရေကူးဝတ်စုံကလေးတွေကလည်း နိုင်ငံခြားသူတွေလို့ အပ်ါတစ်ပိုင်း၊ အောက်တစ်ပိုင်းတွေနဲ့ မမသော်သော်ကပန်းရောင်လေး၊ တီတီလေးကအဖြူ၊ တခြားကောင်မလေးကတော့ အနက်ရောင်လေး။ ......
ကောင်မလေးသုံးယောက်ရဲ့ ဖေါင်းအိနေတဲ့ အဖုတ်လေးတွေကို ဘောင်းဘီးလေးတွေက မလုံ့တလုံအုပ်ထားတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးက တီတီလေးပုံပဲ အဖုတ်အကွဲကြောင်းနေရာလေးမှာ ရေကူးဘောင်းဘီအဖြူလေးက ချိုင်ဝင်နေလိုက်သေးတယ်။
ဖိုးစံမရတော့ဘူး မျက်လုံးကျွတ်မတပ်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကိုကြည့်နေရင်းကနေ ဖွားဖက်တော်ညီလေးကလည်း
တီတီလေးက "နှာဘူးလေး စိတ်ဝင်စားသွားပြီမဟုတ်လား ..... ဟိုတယ်မှာ ငါတို့ (၃)
ယောက်တစ်ခန်းနေရတာလေ နှစ်ယောက်ခန်းကို Extra-Bed ထပ်ထိုးပြီးနေကြတာ၊" နောက် ... ဓာတ်ပုံထဲက ရေကူးဝတ်စုံအမည်းရောင်လေးဝတ်ထားတဲ့ ကောင်မလေးကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး "သူက တောင်ကြီးရုံးကပြောင်းလာတာ နန်းနောင့်နောင့်တဲ့ ကျောင်းမှာတုန်းကတော့ ငါတို့ထက်တစ်တန်းငယ်တယ် အခုတော့ အလုပ်မှာအတူတူပဲ" " ဒါရောက်ရောက်ချင်း ရေထဲမဆင်းခင် ဒီဝတ်စုံကလေးတွေနဲ့ ရိုက်ထားကြတာ ဒါတွေနဲ့တော့ လူကြားထဲထွက်ပြီးရေထဲမဆင်းရဲပါဘူး" ရေထဲဆင်းတော့ ဒါတွေဝတ်ပြီးဆင်းကြတယ်လေ ...."
ဆိုပြီး နောက်တစ်ပုံပြောင်းလိုက်တယ်။ ဒီပုံကတော့သိပ်မစွံပါဘူး။ သူတကာဝတ်နေတဲ့ရေကူးဝတ်စုံလိုမျိုး အပေါ်အောက်တစ်ဆက်ထဲတွေဝတ်ပြီး ရေစပ်မှာရိုက်ထားတာ။ တစ်ကိုယ်လုံးလုံနေအောင်ထုပ်ထားတဲ့အဝတ်ကို အရောင်တွေက ကြောင်ကြောင်ကြားကြားတွေဆိုတဲ့ ကိုယ်လုံးအလှတောင်ခံစားလို့မရဘူး ဒီကြားထဲ ဖင်နားတစ်ဝိုက်မှာ ဖတ်လပ်ဖတ်လပ်နဲ့ စကဒ်ကို အဖတ်ကြီးက ဖင်ဖုံးအောင်ပါလိုက်သေးတယ်။ ဖိုးစံစိတ်မရှည်တော့ပဲ "ကျော်လိုက်ပါတီတီလေးရာ" ဆိုတော့ တီတီလေးကကျော်လိုက်တယ် အဲဒိဝတ်စုံတွေနဲ့ ရေထဲမှာကစားနေတာတွေချည်း ၁၀ ပုံလောက်ရှိတယ်။ ဖိုးစံမျက်စေ့ထဲမှာ ခုဏကပုံလောက်တစ်ခုမှ စွဲဆောင်မှုမရှိဘူး
နောက် ...... ရေကစားပြီး ဟိုတယ်အခန်းထဲပြန်တက်လာတော့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတယ်။ အဲဒိချိန်မှာ တီတီလေးက "လာ ..... နင့်ဖါသာနင်ကွန်ပျူတာကိုလာနှိပ်လှည့်" ဆိုပြီး ဖိုးစံကိုနေရာရွှေ့ပေးတယ် ဖိုးစံလည်း တီတီလေးနဲ့အတူ အိပ်ယာပေါ်တက်ပြီး Arrow key လေးတွေနဲ့ကိုယ့်ဖါသာဓာတ်ပုံတွေကို တစ်ပုံချင်းပြောင်းကြည့်တယ်။
တီတီလေးနဲ့ မမသော်သော် တို့နှစ်ယောက် မျက်နှာသုပ်ပဝါလေးတစ်ထည်စီရင်လျှားထားတဲ့ပုံတွေ ထွက်လာတယ်။ေ
နာက် နန်းနောင့်နောင့်ဆိုတဲ့အစ်မပုံ သူ့ပုံကတော်တော်မိုက်တယ်။ ...... ရေချိုးခန်းထဲကရေပန်းအောက်မှာရေချိုးနေတာကို ရုတ်တရက်ရိုက်ထားပုံရတယ် လက်တစ်ဘက်က နို့နှစ်လုံးကို ရုတ်တရက်လှမ်းအုပ်လိုက်ပြီး တခြားလက်က ကင်မရာကို လှမ်းတားတဲ့ပုံ ကိုယ်တပိုင်းပုံ၊ ရုတ်တက်ချက်ချင်းကာင်မရာရိုက်တာကို ကာကွယ်ဖို့ နို့တွေကို အမြန်လက်နဲ့အုပ်လိုက်ပေမဲ့ မမှီလိုက်ဘူးထင်တယ် လက်ကနို့တစ်လုံးပဲအုပ်မိပြီး
တခြားနို့တစ်လုံးကလွတ်ထွက်နေတယ်။ ရေစက်ရေပေါက်တွေအောက်မှာ အရွယ်ခတ်လပ်လပ်လျှောက်သီးလောက်ရှိတဲ့ နို့တစ်လုံးဟာ သေးသေးချွန်ချွန်နို့သီးခေါင်းလေးတွေနဲ့အတူ
တီတီလေးက " ကောင်လေး ... နှာခေါင်းကြီးလဲမီးထလောင်သွားဦးမယ်...... အဲဒိပုံကိုငါရိုက်လာတာ။
ကောင်မက ငါတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူရေချိုးရမှာ ရှက်သလေးဘာလေးနဲ့ ဘယ်ရမလဲ သူရေချိုးနေတုန်း ငါရုတ်တရက်ဝင်ရိုက်လိုက်တာလေ။ ...... ကြိုက်တယ်မဟုတ်လား" ဖိုးစံဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပါဘူး ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်က နန်းနောင့်နောင့်ဆိုတဲ့အစ်မရဲ့ နို့ကြီးကိုသာမျက်တောင်မခတ်တမ်းငေးကြည့်နေမိတယ်။
နောက်တစ်ပုံ နှစ်ပုံလောက်ကျောတော့ မျက်နှာသုပ်ပဝါပတ်ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖင်ကုန်းပြီး ကြမ်းပေါ်က ပစ္စည်းကောက်တာကို နောက်ကနေ အမိအရရိုက်ယူထားတဲ့ပုံ။ မတ်တပ်ရပ်ရင်တောင် ဖင်ဖုံးရုံလောက်ရှိတဲ့မျက်နှာသုပ်ပဝါက ဖင်ကုန်းပြီးပစ္စည်းလည်းကောက်လိုက်ကော ဖင်ပေါ်တင်နေတဲ့အပိုင်းက ခါးအထိရောက်သွားပြီး ဖွင်ဖွေးဖွေးကြီးနှစ်လုံး နဲ့ အမွေးတစ်ပင်မှမရှိ ပကတိပြောင်ရှင်းနေတဲ့ ဖင်ကြားက စောက်ပတ်လေးဟာ ဓာတ်ပုံထဲမှာ လွန်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာပဲပေါ်နေတယ်။ လား... လား .... ဘယ်သူ့ဖင်လဲဆိုတာ သေချာကြည့်မှ တီတီလေးဖင်ကြီးပါလား .......။
ဖိုးစံ ရင်ခုန်နှုံးတွေမြင့်တက်လာပြီး ပေါင်ကြားကဖွားဖက်တော်ဟာလည်း လွှတ်တင်မဲ့ဆဲဆဲ ဒုံးပျံကြီးတစ်စင်းလို ငေါက်ကခဲ ကိုးဆယ်ဒီဂရိတတိ ထောင်မတ်လာပါတော့တယ်။ ...............
တီတီလေးက "သွားပါပြီ ..... သွားပါပြီ .... စောက်ကောင်မတွေ၊ စောက်ကျင့်မကောင်းဘူး၊ ဘီးကျသွားလို့ ကုန်းကောက်တုန်းနောက်ကနေ ရိုက်လိုက်တာကိုး အခုမှသိတော့တယ်။ နှာဘူးလေး နင်ကလည်း ကိုယ့်အဒေါ်ဖင်ကိုတောင် အလွတ်မပေးဘူး ကြည့်နေလိုက်တာ စားတော့ဝါးတော့မတပ်ပဲ"
"အဲဒိပုံကျော်လိုက်တော့" ဆိုပြီး keyboard ပေါ်တင်ထားတဲ့ ဖိုးစံရဲ့ လက်နှစ်ဘက်အောက်ကနေသူ့လက်ကိုလျှိုပြီး Mouse ကိုလှမ်းအစွဲ .... ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးထောင်မတ်နေတဲ့ ဖိုးစံရဲ့ လီးကြီးကိုတံတောင်ဆစ်နဲ့တိုက်မိလိုက်ပါတယ်။
တီတီလေးက " ကောင်လေး၊ နင်တော်တော်နှာထနိုင်လွန်းတယ်။ ကိုယ့်အဒေါ်ဖင်ကိုကြည့်ပြီး အဲလောက်တောင်နင့်ပစ္စည်းက မဖုံးနိုင်မဖိနိုင်ဖြစ်နေရသလား။ ......... သွားတော၊ နင့်အခန်းပြန်တော့၊ ဟို
သောက်ကောင်မတွေက ငါ့ကိုဘာပုံတွေခိုးရိုက်ထားသေးလဲမသိဘူး။ ငါ့ပုံတွေဖယ်ပြီးမှ နင့်ကိုပြမယ် ငါအရင် ဆင်စာဖြတ်လိုက်ဦးမယ်။ မနက်ဖြန်မှလာကြည့်" ဆိုပြီး ကွန်ပျူတာကိုဆွဲယူသွားပါတော့တယ်။
ဖိုးစံလည်း မျက်စေ့ထဲမှာ တီတီလေးရဲ့ဖင်ကြီးကိုသာမြင်ယောင်နေပြီး အိပ်မက်ကထပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့လူလို ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ အခန်းဝရောက်အောင်လျှောက်လာခဲ့တယ် အခန်းထဲကပြန်ထွက်မယ်အလုပ်။
တီတီလေးက "ကောင်လေး ..... ဒီနေ့ညတော့ နင်အားပြတ်တော့မှာပဲ။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ငါ့ကိုတော့ မမှန်းနဲ့နော် ........."
ဖိုးစံကရုတ်တရက်ဘာဆိုလိုမှန်းနားမလည်လိုက်ပဲနဲ့ "ဗျာ..... တီတီလေး ...... ဘာကိုပြောတာလည်း"
တီတီလေးက "ဗျာမနေနဲ့ မနက်ဖြန်ညမှ ပုံတွေလာကြည့်တော့၊ အခုတော့ ငါ့ပုံတွေဖယ်လိုက်ဦးမယ်"
ဖိုးစံလည်း သူ့အခန်းသူပြန်လာခဲ့တယ်။ ............... မနက်ရောက်တော့ဖိုးစံအစောကြီးနိုးနေတယ်။ တီတီလေးက ငါ့ကိုမမှန်းနဲ့လို့ ပြောလိုက်ပေမဲ့လည်း ဖိုးစံကတော့ ဘီးကုန်းကောက်နေတဲ့ တီတီလေးဖင်ကြီးကို မှန်းပြီး ညမအိပ်ခင် ဂွင်းထုဖြစ်အောင်ကို ထုလိုက်ပါသေးတယ်။ ........
ဖိုးစံနိုးလာပြီးအောက်ထပ်ဆင်းလာတော့ မေမေနဲ့တီတီလေးမနက်စာပြင်နေတယ်။ မေမေက "သားရေ မေမေတော့ ဒီနှစ် မဟာစည်တရားစခန်း ဝင်မယ်စိတ်ကူးထားတယ်။ သိပ်မကြာပါဘူးတစ်ပတ်ထဲပါ။ မင်တီတီလေးလည်းရှိတော့ စားဖို့သောက်ဖို့ကအစ အစစအရာရာစိတ်ချရတယ် တရားစခန်းက မနက်ဖြန်စမှာ ဒီနေ့ညထဲကဝင်ရမယ်။ ညနေကျရင်အမေ့ကို ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုက်ပို့ဦးနော်"
ဖိုးစံက "ဟုတ်ကဲ့" လို့ပဲပြောရသေးတယ်။ တီတီလေးက " နင်တစ်ယောက်ထဲဆိုပြီး သောင်းကျန်းမယ်တော့မကြံနဲ့နော် ငါနဲ့တွေ့သွားမယ်၊ ငါလည်းသင်္ကြရုံးပိတ်ထားလို့ အိမ်မှာအမြဲရှိနေမှာ"
ဖိုးစံက "တီတီလေးကလည်း ကျွန်တော်မသောင်းကျန်းပါဘူး၊ အခုလည်းဖုန်းမှာ အင်တာနက်တွေရနေပြီဆိုတော့ အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီး အင်တာနက်ထိုင်သုံးမှာပါ။"
မေမေက " အေးအေး... မင်းအန်တီလေးကိုထားပြီး ညဉ့်နက်သန်းခေါ်လျှောက်မလယ်နဲ့၊ သူကကြောက်တတ်လို့ ဟိုဘက်အိမ်မှာတောင်မအိပ်ဘူး ဒီဘက်အိမ်လာအိပ်တာ"
ညနေ ၅ နာရီ ခွဲလောက်ကျတော့ မေမေ့ကို တီတီလေးနဲ့နှစ်ယောက်သားဖုန်းကြီးကျောင်းလိုက်ပို့တယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ၆ နာရီ ခွဲခါနီးနေပြီ၊ ရေမိုးချိုး ထမင်းစားပြီးတော့ မနေ့ကပုံတွေကြည့်ချင်နေတာနဲ့ ဖိုးစံတစ်ယောက် တီတီလေးနားမှာ မယောင်မလည်နဲ့ လုပ်နေတယ်။ .......
တီတီလေးက "ဟဲ့ကောင်လေး ..... အိပ်ချင်သွားအိပ်တော့လေ"
ဖိုးစံက "အိပ်သေးပါဘူး၊ အစောကြီးရှိသေးတာ"
ဘာလုပ်နေတာလဲ "ငါ့နားမှာ ယောင်ပေယောင်ပေနဲ့၊ နင်အရင်ကဆို ဒီအချိန်အခန်းထဲမှာပါ"
ဖိုးစံက " ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ဒီလိုပဲ"
တီတီလေးက " ဘာလဲ .... မနေ့ကပုံတွေဆက်ကြည့်ချင်နေတာလား"
ဖိုးစံက " ဟုတ်"
တီတီလေးက "ဒါဆိုလည်း အပေါ်ထပ်သွားရအောင် ငါ့ပုံတွေတောင်ငါမဖယ်ရသေးဘူး" .................
အပေါ်ထပ်တီတီလေးအခန်းထဲရောက်တော့ တီတီလေးက " ငါလက်တော့ ပါဝါကြိုးတပ်ပြီး ဖွင့်ထားလိုက်၊ ငါအဝတ်တွေလဲလိုက်ဦးမယ် အိုက်လွန်းလို့မနေနိုင်ဘူး" ဆိုပြီး
တန်းမှာလှန်းထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုလေးနဲ့ တီရှပ်ပါးပါးလေးတစ်ထည်ကို ဆွဲယူလိုက်တယ်။ ဖိုးစံလည်း လက်တော့ကို ပါဝါကြိုးတွေ mouse တွေတပ်ပြီး ပါဝါခလုပ်ကို ဖွင့်၊ windows တက်ထာကိုစောင့်ရင် တီတီလေး အဝတ်လဲတဲ့နေရာကို မျက်စေ့ရောက်သွားတယ် ...... ဖိုးစံကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာ တီတီလေးက ထဘီကိုရင်ရှားထားပြီးသွားပြီဖိုးစံကိုကျောပေးထားတယ်။ သူကြည့်နေရင်းပဲ ဘောင်းဘီတိုလေးကို ထဘီအောက်ကစွပ်လိုက်ပြီး ထဘီစကို ပါးစပ်နဲ့ကိုက် ၊ ထဘီကွင်းထဲလက်နှစ်ဘက်လျှိုပြီး ဘောင်းဘေီလေးဆွဲတင်လိုက်တယ်
နောက်လက်ကလေးနောက်ပစ်ပြီး ဘရာစီယာလေးကိုပါဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ ထဘီကိုပြန်ရင်လျှား၊ နောက်တီရှပ်ကလေးကို ခေါင်းပေါ်ကနေစွပ်၊ စဘီကို ကွင်းလုံးပုံချွတ်လိုက်ပြီး ထဘီတန်းမှာကောက်တင်လိုက်တယ်။ .........
ဖိုးစံဘက်ကိုမျက်နှာပြန်လှည့်လာပြီး "အိုက်လွန်းလို့ အောက်ကဘာမှမခံပဲဒါတွေဝတ်လိုက်တယ် ကောင်လေး ......... နှာဘူးတော့မထနဲ့နော်။ ငါကနင့်အဒေါ်၊ ငရဲကြီးလိမ့်မယ်လဆိုပြီး အဝတ်လဲတဲ့နေရာကနေ လက်တော့ရှိတဲ့အိပ်ယာပေါ်ကို တစ်လှမ်းချင်းလျှောက်လာတယ်။ တီတီလေးဝတ်ထားတဲ့တီရှပ်က ပွတယ်ဆိုပေမဲ့ ခပ်ပါးပါးအသားဆိုတော့ ဘရာစီယာမပါတဲ့
နို့နှစ်လုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားတာကို အတိုင်းသားတွေ့နေရတဲ့အပြင် နို့သီးခေါ်င်းနေရာလေးတွေကပါ တီရှပ်ပေါ်မှာ ခတ်ဖုဖုလေးဖြစ်နေတယ် ............. အိပ်ယာပေါ်ရောက်တော့ တီတီလေးက ပုံတွေရှိတဲ့ Folder ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ မနေ့က ရောက်ပြီးတဲ့နေရာကနေစပြီးကြည့်တယ်။ ပုံတွေက တော်တော်လန်းတယ်။ မမသော်သော်ပုံတွေများတယ်။ ဘာမှမဝတ်ထားပဲ နို့နှစ်လုံးကိုလက်ကလေးနဲ့အုပ် G-string လေးဝတ်ပြီး ဖင်ကိုပစ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ၊ ရေချိုးခန်းထဲမှာ မမသော်သော်နဲ့ နန်းနောင့်နောင့် တို့နှစ်ယောက်အောက်က ပင်တီဘောင်းဘီလေးပဲပါတယ် အပေါ်ကနို့သီးခေါင်းလေးတွေကို တိပ်လေးတွေနဲ့ကပ်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ၊ တီတီလေးအပါအဝင် သုံးယောက်သား ပင်တီလေးတွေနဲ့ပဲ ကင်မရာရှေ့မှာဖင်တွေကုန်းလို့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ အစုံပါပဲ။
..... ပုံတွေကိုကြည့်ရင် ဖိုးစံရဲ့ဖွားဖက်တော်ကြီးဟာလည်း အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်မှာ အလွန်အမင်းထကြွသောင်းကျန်းနေပါတယ်။ .......
ပုံတွေအားလုံးကုန်သွားတော့ တီတီလေးက " ကဲနှာဘူးလေးရေ ..... ဘယ်လိုလဲ .... တော်တော်ကောကောင်းရဲ့လား " ဖိုးစံပါးစပ်ကပြန်မပြေနိုင်ခေါင်းပဲ ညှိမ့်ပြလိုက်တယ်။ တီတီလေးက ဆက်ပြီးတော့ " နင်ကြည့်ကြည့်နေတဲ့ အင်တာနက်ထဲကကောင်မတွေနဲ့ ငါတို့ပုံတွေဘယ်ဟာပိုမိုက်လဲ"
ဖိုးစံက "တီတီလေးတို့ပုံတွေပိုမိုက်တာပေါ့" .....
တီတီလေးက "အေးပါ နင်နှာဗူးထတဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုရင် နင့်ကွန်ပျူတာသွားယူလာခဲ့ ...... နင့်ကွန်ပြူတာထဲက အသစ်အဆန်းလေးတွေ ငါ့ထဲကိုထည့်ပေးဦး၊ ဟိုကောင်မတွေ ကိုပြရအောင်"
ဖိုးစံက "ကျွန်တော့မှာသိပ်မရှိဘူး နည်းနည်းပဲရှိတာ"
တီတီလေးက " အေးပါ ... ရှိတာသာယူခဲ့စမ်းပါ"
ဖိုးစံသူလက်တော့ယူလာပြီး တီတီလေး လက်တော့နားမှာယှဉ်လျှက် နဲ့ပါဝါဖွင့်လိုက်တယ်။ နောက် (XXX) တွေသိမ်းထားတဲ့ D: ထဲကိုဖွင့်လိုက်တယ် " အဲဒိဖိုဒါထဲမှာ ရှိတာအကုန်ပဲ" ဆိုပြီး ပုံတွေမူဗီတွေ ထည့်ထားတဲ့ ဖိုဒါကို ပြလိုက်တယ်။
တီတီလေးက ဖိုးစံလက်ထဲက mouse ကိုပြောင်းယူလိုက်ပြီး ဖိုဒါကို capacity ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ .............
" အော် ဖိုးစံ ... ဖိုးစံ ... သိပ်မရှိပေလို့ပဲ Hard Disk 500GB မှာ ၄၀၀GB နီးပါးလောက်က ဒီဟာတွေနဲ့ချည်းပြည့်နေတာ" တီတီလေးက ဖိုးစံကွန်ပြူတာထဲမွှေနှောက်ရှာရင်းနဲ့ " ဖိုးစံ ... နင်ရီးစားရှိလား"
ဖိုးစံက "မရှပါဘူး .... ရီးစားလဲမထားဖူးဘူး"
တီတီလေးက " နင်တက္ကသိုလ်တောင်ရောက်ပြီး ရီးစားတစ်ယောက်မှမထားဖူးဘူးလား"
ဆက်ပြီးတော့ "ဒါဆို မိန်းမကောလုပ်ဖူးလား"
ဖိုးစံက " ဟင့်အင်း လုပ်ဖူးဘူး"
တီတီလေးက " ဖါတွေဘာတွေတောင်မချဖူးဘူးလား ..... ဒီအရွယ်ရောက်ပြီ ညံ့လိုက်တာ"
ဖိုးစံက " ဖါတော့မချဖူးဘူး ..... ဒါပေမဲ့ မာဆပ်တော့ နှစ်ခေါက် ရာက်ဖူးတယ် ... သူငယ်ချင်းတွေခေါ်သွားလို့"
တီတီလေးက "မာဆပ်က ဘာလုပ်လို့ရလို့လဲ ..... နှိုပ်ရုံပဲကို"
ဖိုးစံက " လုပ်လို့ရတယ် ...... ကိုယ့်အရည်အချင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ..... ဟိုကိုင်ဒီကိုင်တော့ရတယ်"
တီတီလေးက " အောင်မာ ..... နင်က ဆရာကြီးပေါ့။ ...... ပြောပါဦး မာဆပ်အတွေ့အကြုံလေး ......."
ဖိုးစံက " တီတီလေးကလည်း ဘာတွေလာမေးနေလဲမသိဘူး"
တီတီလေးက " ဘာရှက်နေတာလဲ .... ခုနဓာတ်ပုံတွေကျ နာမီးတောက်ပြီး ကြည့်နေပြီးတော့ အခုမှ ။ ..... လုပ်ပါ ... ပြောစမ်းပါ။ ဧကာန မာဆပ်ကကောင်မကို ဆံပင်လေးကိုင် လက်ကလေးကိုင် လုပ်လာပြီး အဟုတ်ကြီးမှတ်နေတာနဲ့တူပါတယ်။"
ဖိုးစံက " အောင်မာ .... တီတီလေးကလဲ ... ကျွန်တော်ကအကုန်ကိုင်တာ ဟိုဟာတွေလဲပါတယ်။"
တီတီလေးက " ပြောစမ်းပါ ဘယ်ဟာတွေလဲ ခြေထောက်တွေလား"
ဖိုးစံလည်း စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ " နို့တွေကိုင်တာကို ပြောတာ .... ၊ ကောက်ကဟာကိုတောင် အတွင်းခံဘောင်းဘီအပေါ်က ကိုင်ခဲ့သေးတယ် ..."
တီတီလေးက "ဟိုကောင်မကကောနင့်ကိုဘာပြန်လုပ်ပေးလဲနှိပ်ရုံပဲလား "
ဖိုးစံက "မဟုတ်ဘူး မုန့်ဖိုးနည်းနည်းထပ်ပေးတော့ ဟိုဟာလည်းလုပ်ပေးတယ်"
ဖိုးစံက " ကျွန်တော့ဟာကို လက်နဲ့ကိုင်ပြီးလုပ်ပေးတာကိုပြောတာ"
တီတီလေးက " အေးပါ နင်မဆပ်သွားဖူးတယ်ဆိုတော့ နှိပ်နည်းတွေလဲသိမှာပေါ့။ လာ .... မဆပ်ကနှိပ်ပေးသလို နင်ငါ့ကိုလာနှိပ်ပေး၊ "
ဖိုးစံက " ဟာ .... တီတီလေးကလည်း .... ဘာမှမဆိုင်ဘူး ပလိန်းကြီးလာနှိပ်ခိုင်းနေတယ်"
တီတီလေးက " လာပါ ... ငါဇက်ကြောတွေတက်နေလို့နှိပ်ပေးစမ်းပါ။ ငါနင့်ကိုခုနက ပုံတွေပြထားတယ်လေ .... မနှိပ်ပေးရင်နောက်မပြတော့ဘူးနော်"
ဖိုးစံလည်း စိတ်မပါ့တပါနဲ့ တီတီလေး နောက်ကြောကိုရောက်သွားတယ် .....
တီတီလေးက အိပ်ယာပေါ်တင်ထားတဲ့ ဖိုးစံလက်တော့လေးရှေ့မှာတင်ပျင်ခွေထိုင်ပြီး ဖိုးစံလက်တော့ထဲက အောပုံတွေ၊ မူဗီတွေကိုကို သူ့စက်ထဲကူးဖို့ရွေးပြီး Memory
Stick ထည့်နေတယ်။ ဖိုးစံကတီတီလေးနောက်ဘက်ကနေ အိပ်ယာပေါ်မှာဒူးထောက်ပြီး တီတီလေးကိုဇက်ကြောဆွဲပေးနေတယ်။ ........ .............. ပခုံးသားတွေကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ခပ်ဖိဖိလေးနှိပ်ပေးနေရင်းက တီတီလေးက "နင့်ဆီမှာပုံတွေကော၊ မူဗီတွေကောအများကြီးပဲ ..... နင်တာတွေကြည့်ကြည့်ပြီး အမြဲလက်နဲ့လုပ်နေရတာပေါ့ သနားဖို့ကောင်းလိုက်တာ..... "
ဖိုးစံက "ဟာ ... တီတီလေးကလည်း .... ဘာတွေလာပြောနေမှန်းမသိဘူး ...... "
တီတီလေးက "အောင်မာ .... နင်ကပဲရှက်ရတယ်ရှိသေး "
ဖိုးစံက "တီတီလေးကလည်း ..... ကိုယ့်အဒေါ်ဆိုတော့ ရှက်တာပေါ့ "
တီတီလေးက "အောင်မလေး ..... နင်ပြောပုံက... နင့်ဆီက ဟိုပုံတွေကူးနေတဲ့ငါကျတော့ အရှက်မရှိမိန်းမကြီးပေါ့ ဟုတ်လား "
ဖိုးစံက "မဟုတ်ပါဘူး တီတီလေးကလည်း အဲလိုပြောတမဟုတ်ပါဘူး "
တီတီလေးက " ထားပါတော့ .... ဒါနဲ့ နင်.... မိန်းမအစစ်ကို လုပ်မကြည့်ချင်ဘူးဘား၊ "
ဖိုးစံက " လုပ်ကြည့်ချင်တာပေါ့ ဒါပေမဲ့ ဖါသယ်တွေလည်းသွားမလုပ်ချင်ဘူး ... ကျွန်တော်က ပထမဆုံးတွေ့အကြုံကို အမှန်အကန်လေးနဲလုပ်ချင်တာ "
တီတီလေးက " နင့်ကိုရှင်ငါစီစဉ်ပြီးရှင်ပြုပေးမယ် "
ဖိုးစံက "ကျွန်တော်ရှင်ပြုပြီးသား...... ငါးတန်းတုန်းက အလယ်တောရစာသင်တိုက်မှာ ကိုရင် ၁၀ ရက်ဝတ်ခဲ့တယ် "
တီတီလေးက " ငါ့တူလေး ... လယ်မလိုလိုနဲ့ နင်တော်တော်ပိန်းတာပဲ ။.... ရှင်ပြုတယ်ဆိုတာ မိန်းမတခါမှမလုပ်ဖူးတဲ့နင့်ပစ္စည်းကို မိန်းမပစ္စည်းအမှန်အကန်နဲ့ ပေးလုပ်မယ်ပြောတာ "
ဖိုးစံက " တကယ်လား .... "
တီတီလေးက " တကယ်ပေါ့ ...... ငါ သော်သော်နဲ့ နင့်ကိုစီစဉ်ပေးမယ် ...... ဟိုကောင်မကလည်း ဘဲနဲ့ပြတ်သွားတာ တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ တော်တော်ငတ်နေလောက်ပြီ ...။ "
ဖိုးစံက "ကောင်းတယ် မြန်မြန်လေးစီစဉ်ပါလုပ်ပါ .... ဒါနဲ့ မမသော်သော်က သင်္ကြန်ပိတ်ရက်ပြီးမှပြန်လာမှာဆိုတော့ တော်တော်စောင့်ရဦးမှာလဲ "
တီတီလေးက " တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးတဲ့ကောင်ကများ တစ်ပတ်လောက်စောင့်ရမှာကို စောင့်ပေါ့နင်လုပ်ဖူးချင်တာပဲမဟုတ်လား၊ "
တီတီလေးကဆက်ပြီး " နင်ကိုခဲ့တဲ့မာဆပ်ကကောင်မနို့က ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲ အကြီးကြီးပဲလား "
ဖိုးစံက "သိပ်မကြီးဖူး အနေတော်ပဲ .... ကျွန်တော်ကနို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုပါကိုင်မလို့ သူ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေက နို့အုံအထဲဝင်နေတယ်ကိုင်လို့မရဘူး "
တီတီလေးက "ငါ့နို့နဲ့ဆိုဘယ် သူ့ဟာပိုကြီးလဲ "
ဖိုးစံက "ဟာ......တီတီလေးနို့ကိုကျွန်တော်သေချာမှမကြည့်ဖူးတာ မမှန်းတတ်ဘူး "
တီတီလေးက "အောင်မှာ .... ခုနလေးတင်ငါအင်္ကျီလာပြီးဒီဘက်လှည့်လာတော့ ငါ့နို့တွေကို မျက်လုံးကျွတ်မတတ်ကြည့်ပြီးတောများ ... အခုမှ သေချာမကြည့်ဖူးဘူး ဘာဘူးနဲ့ ...... ထားပါတော့။ လက်နဲ့စမ်းကြည့်ရင်တော့ ဘယ်သူ့ဟာပိုကြီးတယ်ဆိုတာ နင်သိနိုင်တယ်မဟုတ်လား ..... ကဲလက်နဲ့စမ်းကြည်ချင်လား "
ဖိုးစံက "အင်း ... စမ်းကြည့်မယ်လေ "
တီတီလေးက "သိပ်မကြိုက်တတ်ရှာဘူးနော်... နှာဘူးလေး " ဆိုပြီ ပြောပြောဆိုဆိုပဲ သူ့နောက်မှာဒူးထောက်လျှက်ဇက်ကြောဆွဲနေတဲ့ ဖိုးစံရဲ့လက်တစ်ဖက်ကို သူ့လက်နှဲ့အသာလေးယူကြီး နို့တစ်ဖက်ပေါ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းတင်ပေးလိုက်တယ်။ ဖိုးစံလည်း မရဲတရဲနဲ့ တီတီလေးနို့ကို တီရှပ်ကလေးပေါ်ကနေ ခပ်ဖွဖွလေးကိုင်ကြည့်နေတယ်။ တီတီလေးနို့က ဟင်းချိုပန်းကန်လုံးအလတ်စားလောက်ရှိတယ်။ မာဆပ်ကကောင်မတွေလိုခပ်ပျော့ပျော့မဟုတ်ဘူး ကျစ်ကျစ်တင်းတင်းလေး၊ ပြီးတော့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကလည်း ဇီးစေ့လောက်လေးတွေ၊ ............
ဖိုးစံနို့သီးခေါင်းလေးကို လက်ညှိုး၊ လက်မနှစ်ဘက်ကြားထဲထည့်ပြီး လှိမ့်ကြည့်လိုက်တယ်။ .....
တီတီလေးပါးစပ်က အင်းဆိုညဉ်းသဲ့သဲ့လေးတစ်ချက်ထွက်သွားတယ်။ .....
တီတီလေးက '' ပြောလေ ... ဘယ်သူ့နို့ပိုကြီးလဲ "
ဖိုးစံက " တီတီလေးနို့က နည်းနည်းပိုကြီတယ် ..... ဒါပေမဲ့သူ့နို့လို ပျော့ပျော့ကြီးမဟုတ်ဘူး၊ တင်းတင်းလေး၊ ပြီးတော့နို့သီးခေါင်းလေးတွေလည်း အပြင်ကိုထွက်နေတယ် "
တီတီလေးက " ကိုင်လို့ကောင်းကောင်းရဲ့လား "
ဖိုးစံက " ကိုင်လို့အရမ်းကောင်းတာပဲ "
တီတီလေက " ဒါဆိုရင်လည်း .... သေသေချာချာကိုင်ကြည့်လေ " ဆိုပြီး သူဝတ်ထားတဲ့ တီရှပ်ကို ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဘရာစီရာလည်းခံမဝတ်ထားတဲ့အတွက် တီတီလေးရဲ့ ဖြူဖွေးလုံးကျစ်နေတဲ့နို့နှစ်လုံးဟာ ငွားငွားစွင့်စွင့်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ ဖိုးစံလည်း တီတီလေးနောက်ကနေသိုင်းဖက်လို့ လက်နှစ်ဘက်နဲ့ တီတီလေးနို့နှစ်လုံးကို နောက်ကနေ အားရပါးရကိုင်နေလိုက်ပါတယ်။
တစ်ချီတော့ဖိုးစံ အားမလိုအားမရဖြစ်ပြီး တီတီလေးရံ့နို့တစ်လုံးကို အားနဲ့ဖိညှစ်မိလိုက်တယ် ....
တီတီလေးက " အား ..... နာလိုက်တာဖိုးစံရာ ... ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ။ " လို့ပြောပြီး လက်တစ်ဘက်ကို နာက်ဘက်ပို့လိုက်ပြီး ဖိုးစံပေါင်ကြာက ဖွားဘက်တောလီးကြီးကို ပုဆိုးပေါ်ကနေစပြီး ပွတ်ပေးနေတယ်။ နောက်တော့ လက်ကိုပုဆိုးထဲထည့်ပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ ပွတ်ပေးနေတယ်။ တစ်ချက်တစ်ချက်လည်း ခပ်တင်းတင်းဆေး ဆုပ်လိုက်သေးတယ်။ ...... ဖိုးစံမနေနိုင်တော့ဘူး လီးကြီးကလည်း ဘောင်းဘီကို ပေါက်ပြီး ထွက်တော့မယ်လို့ ထင်ရလောက်အောင် အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲမှာ ရုံးထနေတယ်။ .......
တီတီလေးက " ဖိုစံ .... ကောင်းလား "
ဖိုးစံ " အင်း " တစ်လုံသာပြန်ဖြေနိုင်တယ်။ ......
တီတီလေက " မင်းကို ငါကိုယ်တိုင်ပဲရှင်ပြေုပေးလိုက်တော့မယ် ...... လာ ... တကိုယ်လုံးချွတ်ပြီးကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်အိပ်လိုက် ၊ ...... တီတီလေးနို့ကို နောက်မှဆက်ကိုင် .... ဖိုးစံကိုတီတီလေးလုပ်ပေးမယ်။ "
ဖိုးစံလည်း အင်္ကျီနဲ့ ပုဆိုးကို အမြန်ချွတ်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်လှန်အိပ်လိုက်တယ်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုတော့ မချွတ်ဘူးချန်ထားတယ်။
အပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်းနေတဲ့ တီတီလေးကပက်လက်အိပ်နေတဲ့ ဖိုးစံရဲ့အပေါ်ကိုမှောက်ချလိုက်ပြီး ဖိုးစံနဲ့နှုပ်ခပ်းချင်းတေ့ပြီးစုပ်လိုက်တယ်။ ..... ဖိုးစံကောင်းကောင်းပြန်မနမ်းတပ်ဘူး။ တီတီလေးကိ သူ့လျှာကို ဖိုးစံလျှာနဲ့ပတ်ပြီး ဖိုးစံပါးစပ်ထဲထည့်လိုက် သူ့ပါးစပ်ထဲပြန်စုပ်ယူလိုက်လုပ်တယ်။
ဖိုးစံလည်း တီတီလေးလုပ်သမျှကို ငြိမ်ခံရင်း သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာဖိထားတဲ့ တီတီလေးကိုယ်လုံးကိုပြန်ဖက်ထားလိုက်တယ်။ ......
နောက်.. တီတီလေးက နှုပ်ခမ်းချင်းနမ်းနေတာကနေ ခွာလိုက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း လောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလျှောချသွာတယ် ဖိုးစံလီးနဲ့မျက်နှာတမ်းတမ်းလောက်ရောက်မှာ ဖိုးစံလီးကို အတွင်းခံဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ သာသာလေးပွတ်ပေးတယ် နောက် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲချွတ်လိုက်တယ် အရှည်းခြောက်လက်မသာသာရှိပြီး လုံးပတ်ကျပ်ပြားဝိုင်းကျော်ကျော်လောက်ရှိတဲ့ ဖိုးစံ၇ဲ့လီးကြီးကာ ဘဘောင်းဘီကနေလွတ်လွတ်ချင်းပဲ လွှတ်တင်တော့မယ်ဒုံပျံကြီးလို ငေါက်ကနဲ ထထောင်လာတယ်။ ...
တီတီလေးက " ဟယ် .... အကြီးကြီးပဲ၊ ဒါမျိုးနဲ့တွေ့ရင် သော်သော်တို့ကတော့ခွာလို့ရမှာကိုမဟုတ်တော့ဘူး " ဆိုပြီး ပြောပြောဆိုဆိုပဲ ဖိုးစံလီးကြီးကိုသူ့လက်ဖဝါးနုနုလေးတွေနဲ့လာဆုပ်လိုက်တယ်။ နောက် ဂွင်ထုသလို သာသာလေးရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ပေးတယ်။ ....
ဖိုးစံမှာလည်း ကောင်းလွန်းလို့ " အ .. အ.. " လို့အသံထွက်ညီးပြီး လီးထိပ်မှာ အရည်လေးတွေတောင်စို့လာတယ် ......
than htike Aung14 January 2013 14:32ဆက်ရေးပါအုံးဗျာReplyDeleteUnknown14 February 2013 12:33သိပ်ကောင်း ဗျို့ ပို့မယ်ပို့တော့ ကန်တို့ ရောက်အောင် ပို့ ပေးပါ ဗျို့ ReplyDeleteMr.tun20 April 2013 13:53ဟုတ်ပါတယ် ဗျာReplyDeleteak rhythm21 April 2013 11:50နောက်ဆက်တွဲလေးဆက်ရေးပါအုံးReplyDeleteအချစ်လေး ကိုပါ8 May 2013 10:14မြန်မြန်ရေးပါဗျ ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ချင်နေပြီးReplyDeleteemogirl lay11 May 2013 20:45myan myan lote Read chin nay PReplyDeleteTayzar Nway18 May 2013 17:34နောက်ဆက်တွဲလေးရေးပါအုံးReplyDeletekyaw kyaw tun29 May 2013 11:03﻿ကောင်းခန်း﻿ရောက်﻿﻿နေမှ မီးကပျက်﻿ရတယ်﻿လို့ ဆက်﻿﻿ရေးပါဦးဗျ အား﻿ပေး﻿နေမယ်﻿။ReplyDeleteMaung OO2 June 2013 00:06ကောင်းခန်းရောက်မှကွာReplyDeleteMaung OO2 June 2013 00:10သော်သော်မျော်နေမှာလေReplyDeleteDD16 August 2013 09:46ဘာလည်းကွာ ကောင်းခန်းမှ...ReplyDeletezawzawhtet17516 August 2013 20:01တော်တော်ကောင်းနေပြီဗျ။ ဆက်ရေးပေးပါအုံး။ReplyDeletesi thusi26 August 2013 08:07This comment has been removed by the author.ReplyDeletebo Hein3 October 2013 07:51ကောင်းတယ်ဗျာ ဆက်ရေးပေးရင် ပိုကောင်းမယ်ReplyDeleteZwepyae Aung2 March 2014 03:09တော်တော်မိုက်တယ်..။ReplyDeleteAdd commentLoad more...
သင်္ကြန်အထူးအစီအစဉ်စနေပါပီ မန်ဘာဝင်ထားကျပါ မူဗီတွေပဲဦးစားပေးတင်ပေးသွားမှာပါ လူရမ်းကား ပြောချင်တာပြော
Q and A Over 18 Readings (80)1. အမျိုးသမီး...
Celebs BirthdayOctober လတွင် ကျရောက်သည့် မွေး...
New Face Model Su Myat Noe in Beautiful Bl...
မြန်မာ့မော်ဒယ် Show မှပုံများ ...
Shwe FM 3rd Anniversary: Achievement Award...
Photos: Wyne Su Khine Thein's "Magic" DVD ...
Celebrities @ Junction Cineplex (Maw Tin) Theater ...
Model Hnin Su Khine Oo in sexy floral shor...
Pregnancy right after your period ရက်ရှောင...
ပုလဲမွန်ဟိုတယ် အမှတ်တရ ဆိုပဲ
Miss Myanmar Nang Khin Zay Yar @ 52nd Miss...
နန်းခင်ဇေယျာအောက်တိုဘာ (၁) ရက်နေ့တွင် Miss.Interna...
The Sign of Love Season2- Press Briefingအောက်တို...
မပေါ့်တပေါ် လျပ်တစ်ပြက် ရိုက်ချက် @nyamint...
MODA Fashion Magazine's Full Moon Day Fun-Fairစက်တ...
Prince & Princess Award of Gamone Pwint 2012 Conte...
New Face Akari Mhu Paing's Color Block Fas...
Award Winning Porn movies Sex Time - V...
Birth control pills for emergency contrace...